News - စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်း၏အခြေခံမူ
Filter Press ကိုပန်းကန်နှင့်ဘောင် filter filter များနှင့် recessed chamber filter ကိုခွဲခြားနိုင်သည်။ အစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲထုတ်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကျယ်ပြန့်သောလိုက်လျောညီထွေမှုရှိခြင်း၊ အထူးသဖြင့် viscous နှင့် fine ပစ္စည်းများခွဲခြားခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
Filter Press ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်အပိုင်းသုံးပိုင်းပါဝင်သည်
1. Frame: frame သည် filter press ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီး၊ thrust plate နှင့် ဦး ခေါင်းနှစ်ခုလုံးကိုအဆုံးသတ်သည်။ နှစ်ဖက်စလုံးသည်ခါးပတ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားကာ၎င်းကို filter ပန်းကန်၊ filter frame များနှင့် press plate တို့အားပံ့ပိုးပေးသည်။
A. တွန်းကန်အားပြားသည်၎င်းကိုထောက်ခံမှုဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားကာ filter စာ၏အဆုံးတစ်ခုသည်အုတ်မြစ်ပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ box filter filter ၏တွန်းကန်အားအလယ်တွင်ကျက်စားသောအပေါက်ဖြစ်ပြီးထောင့်လေးခု၌အပေါက်လေးပေါက်ရှိသည်။ အပေါ်ထောင့်နှစ်ခုသည်အရည်ကိုဆေးကြောခြင်း (သို့) ဓာတ်ငွေ့နှိပ်ခြင်း၏ဝင်ပေါက်ဖြစ်ပြီးအောက်ထောင့်နှစ်ထောင့်သည်ထွက်ပေါက် (subsurface စီးဆင်းမှုတည်ဆောက်ပုံသို့မဟုတ် filtrate ထွက်ပေါက်) ဖြစ်သည်။
ခ။ အောက်ကိုဆွဲပါ။ ၎င်းကို filter ပန်းကန်နှင့် filter frame ကိုကိုင်ထားသည်။ နှစ်ဖက်စလုံးရှိ roller များသည် girder ၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်လှိမ့်ထားသည့်အောက်ခံပြားကိုအသုံးပြုသည်။
C. Girder: ၎င်းသည် load-bearing အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်၏အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးလိုအပ်ချက်များအရ၎င်းအားတင်းကျပ်သော PVC၊ polypropylene၊ သံမဏိသို့မဟုတ်ခြစားမှုအသစ်ဖြင့်ဖုံးအုပ်နိုင်သည်။
2, စာနယ်ဇင်းစတိုင်: လက်စွဲစာအုပ်နှိပ်, စက်မှုဖိအား, ဟိုက်ဒရောလစ်နှိပ်။
A.Manual နှိပ်ခြင်း: screw စက်မှု jack ကို filter plate ကိုဖိဖို့နှိပ်ထားသော plate ကိုအသုံးပြုသည်။
ခ။ စက်မှုဆိုင်ရာနှိပ်ခြင်း - ဖိအားပေးသည့်ယန္တရားသည် motor (အဆင့်မြင့် overload protector တပ်ဆင်ထားသည်)၊ reducer, gear pair, screw rod နှင့် fixed nut ဖြစ်သည်။ နှိပ်လိုက်သောအခါ၊ motor သည်ရှေ့သို့လှည့်ကာ reducer နှင့် gear pair ကိုမောင်းနှင်ရန်အတွက် screw ကိုလှည့်ပြီး fixed screw သို့လှည့်ကာ filter plate နှင့် filter frame ကိုနှိပ်ပါ။ ဖိအားသည်ပိုကြီးပြီးပိုကြီးလာသောအခါမော်တာ၏ဝန်စီးကြောင်းတိုးလာသည်။ Protector မှသတ်မှတ်ထားသောအမြင့်ဆုံးဖိအားကိုရောက်သောအခါမော်တာသည် power supply ကိုဖြတ်တောက်။ လည်ပတ်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝက်အူလှည့်နဲ့ပုံသေဝက်ဘ်ဆိုက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရသောမိမိကိုယ်ကိုသော့ခတ်နိုင်သောဝက်အူထောင့်ရှိခြင်းကြောင့်၎င်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းဖိအားပေးမှုကိုစိတ်ချစွာရရှိနိုင်သည်။ ပြန်လာသည့်အခါမော်တာသည်ပြောင်းပြန်သည်။ ဖိပြားပေါ်တွင်နှိပ်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုသည်ခရီးသွားခလုတ်ကိုထိသောအခါ၎င်းသည်ရပ်တန့်ရန်နောက်သို့ဆုတ်သွားသည်။
ဂ။ , ရေနံဆားကစ်နှင့်ရေနံအကြံပေးအဖွဲ့။ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားကိုစက်မှုလယ်ယာဖိအားပေးသည့်အခါ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဘူတာသည်မြင့်မားသောဖိအားပေးသောရေနံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ရေနံဆလင်ဒါနှင့်ပစ္စတင်တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောဒြပ်ထုအခေါင်းသည်ဆီနှင့်ပြည့်နေသည်။ ဖိအားသည်ပန်းကန်၏ပွတ်တိုက်မှုခံနိုင်ရည်ထက်ကြီးသောအခါဖိအားပေးသည့်ပြားသည်ဖြည်းဖြည်းချင်း filter ကိုဖိစေသည်။ ဖိအားသည်ကယ်ဆယ်ရေးအဆို့ရှင် (ဖိအားအတိုင်းအတာ၏ညွှန်ပြမှုဖြင့်ညွှန်ပြသည်) မှသတ်မှတ်ထားသောဖိအားတန်ဖိုးသို့ရောက်သောအခါ filter plate (filter frame) (filter frame type) သို့မဟုတ် filter plate (recessed chamber type) ကိုဖိ။ ၊ ကယ်ဆယ်ရေး valve ကိုနှိပ်ပါ။ စတင်သောအခါစတင်သည်စတင်ထုတ်လုပ်သည့်အခါမော်တာ၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထောက်ပံ့မှုကိုဖြတ်ပါ။ ပြန်လာသောအခါ, နောက်ပြန်ဆုတ်အဆို့ရှင်ပြောင်းပြန်နှင့်ဖိအားရေနံဆီဆလင်ဒါ၏လှံတံကိုလိုင်ထဲသို့ဝင်။ ရေနံဖိအားသည်ကုန်းမြေပေါ်ရှိပွတ်တိုက်အားခံနိုင်ရည်ကိုကျော်လွှားနိုင်သည့်အခါ၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဖိအားသည်အလိုအလျောက်ဖိအားကိုထိန်းသိမ်းသောအခါဖိအားအားကိုလျှပ်စစ်အဆက်အသွယ်ဖိအားဖြင့်တိုင်းတာသည်။ အထက်ကန့်သတ် pointer နှင့်ဖိအား gauge ၏အောက်ပိုင်းကန့်သတ် pointer လုပ်ငန်းစဉ်များကလိုအပ်သောတန်ဖိုးများမှာသတ်မှတ်ထားသည်။ ဖိအား gauge ၏အထက်ပိုင်းကိုဖိအားပေးသည့်စွမ်းအားရောက်ရှိသောအခါပါဝါထောက်ပံ့မှုပြတ်တောက်သွားပြီးရေနံစုပ်စက်သည်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကိုရပ်တန့်လိုက်သည်။ ရေနံစနစ်၏အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပယိုစိမ့်မှုကြောင့်ဖိအားသည်လျော့ကျသွားသည်။ ဖိအားအတိုင်းအတာသည်အနိမ့်ဆုံးအညွှန်းကိုရောက်သောအခါဖိအားသည်အထက်အကန့်သို့ရောက်သောအခါလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်။ ရေနံစုပ်စက်သည်ရေနံတင်ပို့မှုကိုရပ်တန့်စေပြီး၊ ပစ္စည်းများ filtering ကို၏ဖြစ်စဉ်ကို။
3. Filtering ဖွဲ့စည်းပုံ
filtering ဖွဲ့စည်းပုံကို filter plate, filter frame, filter အထည်နှင့် membrane squeezing တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နှစ် ဦး စလုံး filter ကိုပန်းကန်၏ filter ကိုအထည်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည်။ အမြှေးပါးညှစ်ညှစ်ခြင်းကိုလိုအပ်သည့်အခါ filter ပြားများအုပ်စုသည်အမြှေးပါးပြားနှင့်အခန်းပြားများပါ ၀ င်သည်။ အမြှေးပါးပြား၏အောက်ခံပြား၏နှစ်ဖက်စလုံးကိုရာဘာ / PP အမြှေးပါးများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်၊ အမြှေး၏အပြင်ဘက်ခြမ်းကိုစစ်ထုတ်သည့်အထည်ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့အရွယ်အစားသည် filter medium (အ ၀ တ်အထည်) ၏အချင်းထက်ပိုကြီးပြီး filtertrate plate အောက်ရှိထွက်ပေါက်အပေါက်မှစစ်ထုတ်သည့်အရာသည်အစိုင်အခဲအမှုန်များကို filter အခန်းထဲတွင်ပိတ်မိစေသည်။ filter ကိတ်မုန့်ကိုခြောက်သွေ့အောင်ဖိအားပေးရန်လိုအပ်သည့်အခါအမြှေးပါးဖိခြင်းအပြင်အဝတ်လျှော်သောနေရာမှဖိအားပေးသောလေနှင့်ရေနွေးငွေ့ကိုထည့်သွင်းနိုင်ပြီးလေစီးကြောင်းကိုကိတ်မုန့်အတွင်းရှိအစိုဓာတ်ကိုဆေးကြောနိုင်သည်။ အဆိုပါ filter ကိုကိတ်မုန့်၏အစိုဓာတ်ကို content ။
(1) Filtration mode ကို: filtrate ထွက်သွား၏လမ်းအမျိုးအစား filtration နှင့်တံခါးပိတ်အမျိုးအစား filtration ဖွင့်လှစ်သည်။
A. ပွင့်လင်းသောစီးဆင်းမှုစစ်ထုတ်ခြင်း - ရေဇုန်တစ်ခုကို filter ပန်းကန်တစ်ခုစီ၏အောက်ဆုံးအပေါက်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီး filtrate သည်ရေ nozzle မှတိုက်ရိုက်စီးဆင်းသည်။
ခပိတ်ထားသောစီးဆင်းမှုကိုစစ်ထုတ်ခြင်း - filter plate တစ်ခုချင်းစီ၏အောက်ခြေကိုအရည်ထွက်ပေါက်ချန်နယ်အပေါက်တစ်ခုနှင့်ချိတ်ထားတယ်။ filter out plate များမှအရည်ထွက်ပေါက်အပေါက်များဟာအရည်ထွက်ပေါက်ချန်နယ်ကိုဆက်သွယ်ဖို့အရည်ထွက်ပေါက်ချန်နယ်ကိုချိတ်ဆက်သည်။ အဆိုပါတွန်းကန်အားပန်းကန်အောက်မှာအပေါက်။
(၂) အဝတ်လျှော်ခြင်းနည်းလမ်း - စစ်ထုတ်သည့်ကိတ်မုန့်သည်အဝတ်လျှော်ရန်လိုအပ်သည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံ၎င်းသည်တစ်လမ်းလျှော်ပေးခြင်းနှင့်နှစ်လမ်းသွားဆေးကြောခြင်း၊
A. ပွင့်လင်းစီးဆင်းမှုတစ်လမ်းလျှော်အဝတ်လျှော်အရည်သည်တွန်းကန်အားပန်းကန်၏အဝတ်လျှော်အရည်ဝင်ပေါက်အပေါက်ကနေအဆက်ဆက်ဝင်သော, filter ကိုအထည်ဖြတ်သန်းပြီးတော့ filter ကိုကိတ်မုန့်ဖြတ်သန်းနှင့် nonforforated filter ကိုပန်းကန်မှထွက်စီးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤအချိန်တွင် perforated plate ၏အရည်ထွက်ပေါက် nozzle သည်ပိတ်ထားသောအခြေအနေတွင်ရှိပြီး၊ perforated plate ၏အရည်ထွက်ပေါက် nozzle သည်ပွင့်လင်းသောအခြေအနေတွင်ရှိသည်။
ခ။ ပွင့်လင်းသောစီးဆင်းမှုနှစ်ခု - အ ၀ တ်လျှော်ခြင်းဆိုသည်မှာတွန်းကန်အားအထက်ရှိနှစ်ဖက်စလုံးရှိအရည်အ ၀ င်အပေါက်များမှနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဝတ်လျှော်အရည်ကိုတစ်ဖက်မှပထမ ဦး ဆုံး၊ နောက်တစ်ဖက်မှဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်။ ။ အဝတ်လျှော်သည့်အရည်၏ထွက်ပေါက်သည် ၀ င်ပေါက်နှင့်အချင်းချင်းထောင့်ဖြတ်ဖြစ်သည်၊
C. အောက်ရေစီးစီးဆင်းသော polyester စီးဆင်းမှုသည်အဝတ်လျှော်အရည်သည် perforated plate ထဲသို့တွန်းကန်အားအရည်၏အ ၀ င်ပေါက်အပေါက်မှအဆက်မပြတ်ဝင်သည်၊ filter filter ကိုဖြတ်သန်းပြီးလျှင် filter filter ကို ဖြတ်၍ non ထံမှထွက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ဖောက်ထား filter ကိုပန်းကန်။
(Under) အောက်လျှော်နှစ်လမ်းသွားလျှော်ခြင်းသည်ဆေးပါ ၀ င်သောအရည်သည် stop plate အထက်နှစ်ဖက်စလုံးရှိလျှော်နေသောအရည်ဝင်ပေါက်အပေါက်နှစ်ခုမှနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအဝတ်လျှော်အရည်ကိုတစ်ဖက်မှ ဦး စွာဆေးကြောပြီးလျှင်၊ ။ အဝတ်လျှော်အရည်၏ထွက်ပေါက်ထောင့်ဖြတ်, ဒါကြောင့်လည်း၎င်းကို undercurrent နှစ်လမ်းလက်ဝါးကပ်တိုင်အဝတ်လျှော်ဟုခေါ်သည်။
(၃) စစ်ထုတ်သည့်အ ၀ တ် - စစ်ထုတ်သည့်အထည်သည်အဓိက filter medium တစ်ခုဖြစ်သည်။ စစ်ထုတ်သည့်အထည်ကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းသည်စစ်ထုတ်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတွင်အဓိကကျသည်။ ရွေးချယ်သည့်အခါသင့်လျော်သော filter အထည်နှင့်အရွယ်အစားကို filter ပစ္စည်း၏ pH တန်ဖိုး၊ အစိုင်အခဲအမှုန်အရွယ်အစားနှင့်အခြားအချက်များအရရွေးချယ်သင့်သည်။ သို့မှသာအနိမ့် filtration ကုန်ကျမှုနှင့်မြင့်မားသော filtration ထိရောက်မှုရှိသည်။ အသုံးပြုသည့်အခါစစ်ထုတ်သည့်အ ၀ တ်အစားသည်ချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်သင့်သည်။
ခေတ်သစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှဓာတ်သတ္တုအရင်းအမြစ်များသည်တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ကုန်ခန်းသွားပြီးသတ္တုရိုင်းများသည်“ ဆင်းရဲ၊ ဒဏ်ငွေနှင့်အထွေထွေ” အခြေအနေနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်လူများသည်သတ္တုရိုင်းများကိုကြိတ်ဆုံနှင့်ကြမ်း၊ ရွှံ့နှင့်ရွှံ့စေးများကိုအစိုင်အခဲအရည်မှခွဲထုတ်ရမည်။ ယနေ့ခေတ်တွင်စွမ်းအင်ချွေတာမှုနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးတို့အတွက်မြင့်မားသောလိုအပ်ချက်များအပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်အစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားပြီးပိုမိုကျယ်ပြန့်သောလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြကြသည်။ ဓာတ်သတ္တုထုတ်လုပ်မှု၊ သတ္တု၊ ရေနံ၊ ကျောက်မီးသွေး၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အစားအစာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၏လူမှုရေးလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရာတွင်အစိုင်အခဲ - အရည်ခွဲထုတ်ခြင်းနည်းပညာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး၊ တိုးချဲ့နေဆဲ